Muqdisho oo ay kasoo baxeen 4 koox oo si cajiib ah ula dagaalaya Shabaab |
Muqdisho oo ay kasoo baxeen 4 koox oo si cajiib ah ula dagaalaya Shabaab
Ururrada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya iyo hoggaamiye diimeedka ayaa iska kaashanaya in ay bilaabaan olole wacyi-galin ah oo looga golleeyahay in lagula dagaallamo aydiyoolajiyadda xagjirnimada ee goobaha laga xoreeyay al-Shabaab.
Ururka fadhigiisu yahay Muqdisho ee Xarunta Wadahadalka Bulshada (CCD) culumaa’u-diin ka tirsan Ahlu Sunna wal Jamaaca, Ururka Haweenka Benaadir iyo Ururka Dhallinyarada Benaadir ayaa is wadajir ah u sameeyay qorshaha, kaasoo ay fududeeynayso CCD.
Ololaha ayaa ka koobnaan doona kulamo xiriir ah oo loo qaabeeyay sida siminnaaradda kuwaa oo socon doona maalin oo lagu qaban doono daafaha dalka kana bilaabanayaBaraawe bisha January, ayuu Agaasimaha CCD Ciise Axmed Cumar yiri.
Waxa uu sheegay, in ay intaa dheertahay in ururrada kulammo lahaayeen looga wadahadlayay guulihii hore, mawaadiicda looga hadlayo ololaha iyo loojiistikada lagu fulinayo barnaamijka cusub.
Magaalo walba waxa laga dooran doonaa lix qof oo laga soo doortay odayaasha dhaqanka, ururrada haweenka iyo kooxaha maxalliga ah si ay u hoggaamiyaan una hagaan kulannada.
“Waxan diyaarinaynaa lix qaddiyadood oo [diiradda la saarayo], ” ayuu yiri Cumar. “Ka qayb-galayaasha waxa loo kala jajabin doonaa koxoo ka kooban toban si ay u rogrogaan ulana yimaadaan qaabab ay wax uga qaban karaan qaddiyadda. [Koox walba] waxay qorsheheeda u gudbin doontaa ka qayb-galayaasha kale.”
“Ma noqon doonto arrintu in inta khudbado la jeediyo lagu kala dareero,” ayuu yiri, isaga oo intaa ku daray in yoolku yahay in bulshadu howsha faraha la soo gasho, wacyi-galinna looga sameeyo khataraha xagjirnimada laga gaaro xuluul ku aaddan sidii loola dagaallami lahaa aydiyoolajiyadda xagjirnimada ee heer degaan.
Ulajeedku waxa weeye in ka qayb-galayaasha loo oggolaado in ay dareemaan firfircooni iyo heellanaan ay ula wadaagaan aqoontooda bulshada kale marka ay ka baxaan kulanka, ayuu sheegay.
Jabhad u mideeysan baddalidda fikirka xagjirnimo
“Dawladdu waxay la timid awooddii, gaar ahaan Howlgalka Badweynta Hindiya, ee al-Shabaab looga saaray dalka,” ayuu yiri Cumar. “Urur ahaan waxan doonaynaa in aan [la nimaanno awooddii] loo baabi’in lahaa fikirkii xagjirnimada ahaa ee ay ka tagtay al-Shabaab.”
Inkasta oo howlgalka millatari ee ay sida wadajirka ah u wadaan askarta Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) iyo kuwa dawladda Soomaaliya uu ku guulaysanayo in uu ka xoreeyo al-Shabaab goobo badan, haddana wakhti dheer ayay qaadan doontaa in la dabar-gooyo fikradihii khaldanaa ee kooxda xagjirka ah, ayuu sheegay.
“Marba haddii an ku dhiirrannay lixdii sano ee lasoo dhaafay in fikirka xagjirnimada aan ka wacayi-galinno bulshada, maanta oo laga adkaaday al-Shabaab, waxan aamisannahay in fursad intii hore ka weyn aan haysano oo aan gaari karno magaaloyinka ay ku xogganaayeen sida Baraawe iyo Buulo Burde,” ayuu yiri.
“Waxa aan doonayno waa in loo midoobo cunuga yar ee maskaxda laga marin habaabiyay,” ayuu yiri Cumar. “Dhinac walba oo uu tago, sida wadaadada diinta sida fican u yaqaano oo ku yiraahda ‘War haddii aad isqarxiso naar baad galaysaa’, oday-dhaqameedku uu ku yiraahdo ‘War isqarxis wax aan dhaqan u leenahay ma ahan’ , hoyadiina waa in ay ku tiraahdo, ‘Ka joog isqarxiska.’”
“Sidoo kalena aan u geyno dhallinyaro ka wacayigilinaysa dhalinyarada la khalday ee loo sheegay fikirka xagjirnimada in u saxan yahay,” ayuu raaciyay.
“Meel walba oo cadowga ummadda Soomaaliyeed laga saaro sida loogu baahan yahay in la gaarsiiyo gargaar bini’aadannimo ayey ugu baahan yihiin in la gaarsiyo barnaamijyo wacyi-galin ah [oo argagixisada ka dhan ah],” ayuu yiri. “Waxaan gaarsiinaynaa dhulalka laga saaray al-Shabaab barnaamijyo wacyi-galin ah annaga oo la shaqeeynayna dawladdeenna Soomaaliya.”
Ololaha — oo looga dhawaaqay kulan lagu qabtay Muqdisho 19-kii October — ayaa lacag ka helay milkiilayaasha ganacsiga khaaska ah iyo Soomaalida qurba-joogga ah, ayuu sheegay Cumar, isaga oo diiday in uu sheego tirada lacagta ay heleen.
Hoggaamiyayaasha diinta, haweenka iyo dhallinyarada oo cayaaraya kaalin muhiim ah
Yool kale oo muhiim ah oo laga leeyahay olalahan waa in laga caawiyo muwaadiniinta ku go’doomay meelihii ay hore ugu xoogganaan jirtay al-Shabaab in ay dib ugu soo xirmaan qaybaha kale ee dalka iyada oo la dhiirri-galinayo wadahadalka dhex maraya gobollada, ayuu sheegay Cumar.
Goobihii ay haysan jirtay al-Shabaab, ayay kooxda xagjirka ahi waay si joogto ah xayiraad ugu soo rogi jirtay raadiyayaasha iyo telefishannada, isticmaalka internetka iyo taleefannada moobiilka ah, waxayna isha ku hayn jirtay dhaqdhaqaaqa muwaadiniinta si ay u xakameeyso una kala shaandheeyso macluumaadka.
Al-Shabaab ayaa sidoo kale aayado diini ah u isticmaali jirtay in ay si sharci-darro ah canshuur uga qaaddo dadka degaanka xoolahoodana u dhacdo.
Laakiin Sheekh Cabdulqaadir Maxamed Soomoow, oo ah afhayeenka Golaha Sare ee Culimada Ahlu Sunna wal Jamaaca, ayaa sheegay in Islaamku uu farayo dadka taabacsan in ay diidaan afkaarta xagjirnimo.
“Meel kasta oo dalka laga xoreyo al-shabab sida ay ugu bahan tahay in daawo, raashin, iyo biyo nadiif ah loo geeyo ayey uga sii baahi badan tahay in maskaxda laga dhaqo dadka sannadaha badan afkaarta lagu shubayay ee kalliftay in qofka hoyadiis ama aabihis iyo ehelkiisa lagu qanciyo in uu dilo naftiisana qarxiyo,” ayuu yiri. “Fikirka saas ah oo kansarka ah oo faafaya ayaan dooneeynaa in aan ka qeyb-qaadanno wixii wacayigilin ah ee nooga aaddan.”
Dhinaceeda, ayay Jawaahir Baarqab, agaasimaha Ururka Haweenka Benaadir, waxay sheegtay in haweenku ay kaalin weyn ka cayaari karaan dhaqidda maskaxda dhallinyarada lagu marin habaabiyay afkaarta xagjirnimada ah.
“Markii aan ogaanay in aan haween ahaan kaalin weyn aan ka qaadan karno la-dagaallanka fikirka argagixisanimada ee ay wadaan al-shabab, ayaan go’aan ku gaarnay in an kasoo muuqanno kaalintenna,” ayay tiri. “Waxaan u mahadcelinaynaa dadkii nagu dhiirri-galiyay in aan sii wadno ujeeddadeena, haddii ay ahaan lahaayeen ganacsato iyo qurba joog intaba, iyo gaar ahaan hay’adda CCD.”
Guddoomiye Ku-xigeenka Ururka Dhallinyarada Gobolka Benaadir Xasan Sheekh Cabdi Abuukar ayaa sheegay in ururkiisu uu mar walba ka shaqeeyn jiray sidii dhallinyarada looga samata-bixin lahaa qaadashada afkaaraha khaldan, haddana ay door muuqda ka ciyaari doonaan wacyi-galinta qaddiyaddaas.
“Waxa ay kaalinteena tahay sidii dhalinyarada looga wacyi-galin lahaa afkaarta khaldan ee xagjirnimada, gaar ahaan kuwa wali aaminsan fikirka xagjirnimada ee ku jira al-Shabaab, annaga oo adeegsaneeyna kulamo wacyigalin ah oo ballaran,” ayuu yiri, isaga oo intaa raaciyay in olalaha cusub ee wacyi-galintu uu doonayo in uu isku xiro dhammaan dhallinyarada Soomaaliya. where can i buy clomid online, buy zithromax online.